Yako Spin Inotyaira Inoongorora uye Kusavimba | Martech Zone
Yako Spin Inotyaira Drives Kuongorora uye Kusavimba
China, Gunyana 6, 2012 Douglas Karr
Ndine makore makumi mana nemana izvozvi uye ndinogara ndichiyeuka vabereki vangu nasekuru naambuya vachiti havasati vamboona sarudzo yakaipa… nesarudzo yega yega. Handina chokwadi chekuti sarudzo dzinonyanya kushata, ndinofunga zvingangoitika ndezvekuti isu tinongokura takasimba mune zvatinotenda uye hatiregedze kuwanda. Ndinozviwana ndave kutsvaga izvo zvirevo zvezvematongerwo enyika zvakanyanya kupfuura zvandaimboita, uye ndinoshamiswa nekuwanda kwekuruka kwazvakaita.
Makumi maviri emakore apfuura, ini handina kukwanisa kutsvaga muYouTube uye ndione quote chaiyo kana flip kuWikipedia kuti ndione nezve spin. Nhasi, ndiri kuzviita kubva kuPadad yangu ndakagara pamubhedha ndichiona wezvematongerwo enyika. Ndiri kuzviita nekuti kutenderera kwavo kuri kuvaka kufungira kwangu. Kana ini ndaivimba navo, handina chokwadi chekuti ndingave ndichinyatsovatarisa mune chaiyo-nguva. Mitemo yakafanana inoshanda kubhizinesi rako, chigadzirwa kana sevhisi.
Chinhu chakakosha ndechekuti vezvematongerwo enyika vedu vanoedza kubata iyo brand kukwana izvo zvaive zvakajairika makumi emakore apfuura uye izvo zvaigona kubatwa kumusoro munhau. Mune ino 24 maawa enhau kutenderera nevhidhiyo marekodhi pane vezvematongerwo enyika ingangoita mineti yega yezuva, mucherechedzo haumire mukana. Mhedzisiro yacho ndeyekuti zvisirizvo zvese zvinonzwikwa kuburikidza nenzvimbo dzinopikisa uye zviteshi zvinosvika pakona dzese dzepasi. Hazvishamise, sekureva kwaGallop, izvo 1 chete mu10 maAmerican vanobvuma yekongiresi 'kuita.
Dambudziko nderekuti vanhu vanokanganisa uye kukwana. Saka nepo kushambadzira kwevezvematongerwo enyika kuchikura, kuongororwa uye kusavimbika kwevaya vezvematongerwo enyika kunowedzera pamwero mukuru. Iwo mazwi ezvematongerwo enyika uye kushambadzira angango chinjana. Masangano ezvematongerwo enyika anoongorora vateereri, kupora mazwi, hyper-target geographic uye ehupfumi makirasi. Inonzwika zvakanyanya sevashambadzi.
Pane chidzidzo kune vashambadziri mukuwongorora uye kusafarira vezvematongerwo enyika. Paunowedzera kuwedzeredza kutenderera kwezvigadzirwa zvako nemasevhisi, zvinowanzoita kuti usangobvarura mukurumbira wako… uchauparadza. Kunyanya kushambadzira kwaunoisa iwe, kwakadzika kusavimba uye kunyanya kuongororwa kunoitwa. Kunyangwe nevatengi vedu pachezvangu, ini ndinogara ndichichengetedza mune yangu marongero ezvinotarisirwa. Kupotsa chinangwa kunogona kukanganwirwa nemutengi wako. Kunyepa nezve chinangwa hakuzove.
Blueprint yeYakaedzwa Yekumhara Peji
Mobile Webhu Traffic Statistics